User talk:Ismail qaran - Wikipedia
User talk:Ismail qaran
Haye Ismail qaran! Ku soo dhawoow Wikipedia
Wikipedia waa mashruuc bedel wadareed ee Insaykalobeedhiya aqoon iyo dhaqan ku dhisan luqadihiisa kala gedisan. meel caawinaad laga dalbado xilli kasta, waxaa jira hab (Caawinaad) ee aad ka heli karto bogga dhamaantiis.
Fadlan aqri tillabooyinkaa koowaad hab bedelka, iyo habka bedelka bogagga iyo samaynta maqaallo cusub iyo isku toosintooda sida habka wikipedia. kadib bacaadka si aad halkaa ugu tijaabiso tillaabada koowaad.
Soo jeedin ayaad samayn kartaa iyo su'aalo taasoo ku saabsan habka shaqada ee wikipedia waxaa sidaas oo kale awoodaa Su'aashaada. Cilmiga ah kuna dhisan anshax.
Waxaa kaloo awoodaa Qeexis ku sameeyso waxaa tahay boggaada gaarka ah, adigoo iska qora macluumaad oo kugu saabsan: luqadaha aad ku hadasho, Dalkee tahay, maxase danaynaysaa?...
Ha ka tagin saxiixa ee Bogagga wadahadalka qorista afar xarriiq sidaan ~~~~. laakiin waxaa lagaa rabaa inaan la saxiixin maqaalada, maxaa yeelay waxay noqonayaan wada lahaansho marka la sameeyo.
Waxaan kaa codsanaynaa inaad eegto shanta walxood ee wikipedia iyo habka raadraaca (dhexdhexaadnimo, iyo soo xigashada, iyo usluubka bedelka, iyo habka siirada ama taariikh nololeedka, si ku haboon taariikhda qofka). sida laga doonayo ha ka tagin inaadan internetka nuqul ka soo qaadan sababaha milkiyada xuquuqda muallifka. sidoo kale waxaad awoodaa inaad ka qayb qaadato Mashaariicda wikipedia inaad ku darsato mowduucii ku cajab geliya.
Waan soo dhaweynaynaa ka qayb-qaadashada Soo galinta fayl, si loogu qurxiyo maqaalada, adigoo il gooniya u eegya xeerarka ku saabsan Xeerka adeegsiga sawirka iyo ixtiraamidda milkiyada xuquuqda muallifka. waxaa kaloo jira wikipediyeyaal iskaa wax u qabso ah ee Graphics Lab si ay u hagaajiyaan sawirada.
Ugu dambeyn, waana kan ugu muhimsan Waxaan kaa rajaynaynaa inaad ku dhiirato gacan naga siiso mashruucaan!
Haddii aad hayso soo jeedin ama su'aalo, waxaad ku soo ban dhigi kartaa Boggaan ama bogga wadahadalka.
--AbshirBot• Wadahadal 17:43, 8 Juun 2020 (UTC)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Ismail_qaran&oldid=201995"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Juun 2020, marka ee eheed 17:43.